07/26/12 ~ The Ahmadi Post : Myanmar
ဥပုသ်သီလတည်ဆောက်ခြင်းသမိုင်း (အပိုင်း ၃)
သိဒ္ဓိတ္ထမင်းသားသည် ဗုဒ္ဓအဖြစ်မရောက်ရှိမီအလျင်က အစာဖြတ်ကျင့်စဉ်ဖြစ်သော ဒုက္ခရစရိယာကို ၄ နှစ်တိုင်ကျင့်ကြံခဲ့သည်။ ယင်းကို မဟာယန သုတ္တန်များထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။ (ထေရဝါဒ သုတ္တန်များထဲ၌လည်းဖော်ပြထားသည်။) ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးများနှင့် သီလရှင်များသည် နေ့လည် ခင်းမတိုင်မီ ဆွမ်းစားပြီးနောက်ပိုင်း အစာစားသုံးခြင်းမပြုကြတော့ပေ။ ယင်းသည် ဥပုသ်ဆောက် တည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ တရားထိုင်ရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် စည်းကမ်းချက် သာဖြစ်သည်။ အချို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အယူအဆအရမူ ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းသည် အလယ်အလတ် လမ်းနှင့် ဆန့်ကျင်သဖြင့် ဆောက်တည်ရန်မလိုဟု သိရသော်လည်း အများအားဖြင့် ဝါတွင်းကာလ ဟူ၍သတ်မှတ်ကာ ဥပုသ်ဆောက်တည်ကြပေသည်။
Eve Adamson နှင့် Linda Horning တို့ ရေးသားသည့် “The Complete Idiot’s Guide to Fasting” စာအုပ်အရမူ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ဂိုဏ်းကွဲအများအပြားရှိပြီး ထိုအထဲတွင် အများစုမှာ စိတ် လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဥပုသ်ဆောက်တည် ခြင်းကို ပြုလုပ်ကြလေသည်။ အချို့ကမူ လပြည့်နေ့များနှင့် အခါကြီးရက်ကြီးများတွင် ဥပုသ်စောင့်ကြ သည်။ ထိုနေ့များတွင် ဥပုသ်စောင့်သူများမှာ အဖတ် (အရည်ကိုသာ စားသုံးနိုင်) ကိုရှောင်ကြဉ်ကြ ရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဥပုသ်စောင့်ကြပြီး အချို့ကမူ အဆုံး စွန်သော နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုမြင်ရန်အတွက် ဤလောကကြီးမှာ အာရုံများကိုဖြတ်တောက်ဖို့လွယ်ကူစေရန် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဥပုသ်စောင့်ကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် တရားထိုင်ခြင်းနှင့် ဥပုသ်စောင့်ခြင်းတို့မှာ ဒွန်တွဲလာပေသည်။
တမန်တော် အီစာ (as) သည် တမန်တော်အဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းမခံရမီကပင် ဥပုသ်ဆောက်တည် ကြောင်းကို သိရပေသည်။
ယင်းကို ဘိုင်ဘလ်၌ ယေရှုသည် ခရစ်တော်အဖြစ်မရောက်မီ ဥပုသ်ဆောက်တည်လေ့ရှိကြောင်းဖြင့် ရှင်မဿဲ ၄:၂ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ခရစ်ယာန်သာသနာတွင် လန့်ထ် (Lent) ဟူသည် အီစတာမတိုင်မီ အပြစ်များမှ နောင်တရခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဥပုသ်ဆောက်တည်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အနောက်နိုင်ငံများရှိ ချာ့ချ်များတွင် Ash Wednesday ဟုခေါ်သော အီစတာမတိုင်မီ ၇ ပတ်အကြို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လန့်ထ်ဥပုသ်စောင့်ခြင်းစတင်၍ တနင်္ဂနွေ နေ့များမှလွဲပြီး ရက်ပေါင်း ၄၀ ဖြည့်ဆီး ကြလေသည်။ ယင်းသို့ဖြည့်ဆီးခြင်းမှာ ယေရှုခရစ်က တောအုပ်အတွင်း ဥပုသ်ဆောက် တည်ခြင်းကို အမှတ်ရပြုလုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အရှေ့တိုင်းချာ့ချ်များတွင်မူ လန့်ထ်ကို အီစတာမတိုင်မီ ၇ ပတ် အကြို တနင်္လာနေ့တွင်စတင်ပြီး အီစတာမတိုင်မီ ၉ ရက်အလို သောကြာတွင် အဆုံးသတ်သည်။ ထို ရက် ၄၀ လန့်ထ်ဥပုသ်စောင့်ခြင်းတွင် စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များကို ဥပုသ်စောင့်ခြင်းမှ အနားယူသည့် နေ့များအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
အွန်လိုင်း ဗြိတိသျှစွယ်စုံကျမ်းအရ လန့်ထ်ဥပုသ်စောင့်ခြင်းကို ယေရှု၏သာဝကများလက်ထက်မှ စတင်ပြီးအီစတာမတိုင်မီ အကြိုအနေဖြင့် ဖြည့်ဆီးကြကြောင်း၊ ထိုအထဲတွင် အပြစ်ဖြေခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းများအတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်များပြင်ဆင်ခြင်းအချိန်လည်းပါ၀င်သည်။
ရာစုစောပိုင်းကာလများက ဥပုသ်စောင့်ခြင်းနည်းနာသည် ပြင်းထန်တင်းကြပ်ခဲ့ပြီး အရှေ့တိုင်း များတွင် ယင်းပုံစံကို တွေ့နေရဆဲဖြစ်သည်။ ညနေပိုင်းတွင် အစာတစ်ကြိမ်စားသုံးနိုင်ပြီး အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥနှင့် ထောပတ်ကို တားမြစ်သည်။ အရှေ့တိုင်းချာ့ချ်များကမူ ထိုအရာများအပြင် ဝိုင် ၊ ဆီ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုလည်း တားမြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းတွင် ယင်းသို့သော ဥပုသ်တည်ဆောက် ခြင်းနည်းမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း လျော့ရဲ လာခဲ့လေသည်။ ရိုမန်ကက်သလစ်များ၌ ယင်းသို့သော တင်းကြပ်သည့် ဥပုသ်စောင့်ခြင်းဥပဒေမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကပင် ပယ်ပျက်သွားခဲ့ပြီး Ash Wednesday နှင့် Good Friday တို့ကိုသာ လန့်ထ်ဥပုသ်စောင့်ခြင်းနေ့ရက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အပြစ်များမှ နောင်တရရှိခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကိုမူ ဆက်လက်တည် မြဲစေခဲ့ကြသည်။ ("Lent." Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 26 Aug. 2008http://www.britannica.com/EBchecked/topic/336104/Lent)
ဘိုင်ဘလ်တွင် ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အများအပြားတွေ့ရှိရသည်။ လူအများသည် အခြေအနေသုံးမျိုးတွင် ရက်ပေါင်း ၄၀ ဥပုသ်ဆောက်တည်ကြသည်။ သို့သော် ယင်းသို့ဆောက် တည်ခြင်းမှာ အလေ့အထတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ အချို့သောအခြေအနေများတွင်သာ ကျင့်သုံးသည့် သာမာန်မဟုတ်သော အလေ့အထဖြစ်သည်။ တမန်တော်မိုးစက်၏ ဥပဒေ ၁၀ ချက် လက်ခံရရှိပြီး နောက်ပထမဦး ဆုံးဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းအလေ့အထ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ (ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃၄:၂၈) ဒုတိယ ဥပုသ်စောင့်ခြင်းအလေ့အထကို ဧလိယက ဧလိရှဲအား ဘိသိက်မပေးမီအလျင် ဘုရားအားဖူးမြော်တွေ့ပြီးသည့်နောက်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ( ဓမ္မရာဇဝင် ၃၊ ၁၉:၈ ရှု) တတိယအလေ့အထကို ယေရှုသည် တောအတွင်း၌ရှိနေစဉ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၄:၂ ရှု)
ပုံမှန်အားဖြင့် အစာရှောင်ခြင်းသည် ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်း၏ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ( ဒံယေ လအနာဂတ္တိ ၆:၁၈ ရှု) လူတို့သည် အစာနှင့် ရေတို့မှ ဖြတ်တောက်နေကြသည့် အလေ့အထ ရှိခဲ့ဖူး သော်လည်း ယင်းသည် အမြဲတစေပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစဉ်အလာမဟုတ်ပေ။ ( ဧဇရမှတ်စာ ၁၀:၆ ရှု ) ပုံမှန်အားဖြင့် ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းသည် တစ်နေ့သာကြာမြင့်သည်။ (တရားသူကြီး မှတ်စာ ၂၀:၂၆ ရှု) အချို့အခါများတွင်မူ ၃ ရက်ကြာမြင့်သည်။ (ဧသတာဝတ္တု ၄:၁၆ ရှု) သို့မဟုတ် ၇ ရက် ကြာမြင့်သည်၊ “၁၃အရိုးတို့ကိုလည်း ယူ၍ ယာဗက်မြို‹မှာ သစ်ပင်အောက်၌ သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး အစာရှောင်ကြ၏။” ( ဓမ္မရာဇဝင် ၁ ၊ ၃၁:၁၃)
ခက်ခဲမှုများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများရှိလာသည့်အခါ ဥပုသ်ဆောက်တည်ကြသည်။ ဥပုသ် ဆောက်တည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားနှင့် ကြောက်ရွံ့ရိုကျိုးခြင်းဖြင့်၊ ပူပင်သောကများအားဖြင့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင် ရာထိခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ် နောင်တရရှိခြင်းဖြင့် အဆက်အသွယ်ကိုဖြစ်စေလေသည်။ မိမိ၏ အာရုံများ ကို ဥပုသ်အားဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကြောင့် သန့်စင်ခြင်းသို့မဟုတ် ဖြူစင်ဖြောင့် မတ်ခြင်းသို့ ဆိုက် ရောက်ရာ၏။ ထို့ပြင် ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းဖြင့် ခက်ခဲလျက်ရှိနေသောအခြေအနေကို ဝိညာဉ်ရေး ရာ အကူအညီဖြင့် လွတ်မြောက်စေနိုင်ပြီး ဘုရားရှင်ထံတော်ပါးတွင် ကွဲပြားခြားနားသည့် အခြေအနေတစ်ခုကို တောင်းဆိုရန်အတွက်လည်းကောင်း ၊ ဘုရားရှင်အား မိမိတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် ၀တ္တရားများကို ကြည်ဖြူစွာထမ်းဆောင်ပါမည်အကြောင်းပြဆိုရာအဖြစ်လည်းကောင်း သက်ရောက် စေလေသည်။ (ဧသတာဝတ္တု ၄:၃ ရှု )
ဘုရားရှင်အား အခြေအနေအခက်အခဲတစ်ခုအကြားတွင် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းခြင်းအနေဖြင့်လည်း ဥပုသ်ဆောက်တည်ရာ၏။ ၁၃ငါ မူကား၊ သူတို့၌ အနာရောဂါ စွဲသောအခါ၊ လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်ဆင်လျက်် အစာကို ရှောင်၍ ခြိုးခြံစွာ ကျင့်လေ၏။ ကိုယ်ရင် ခွင်ကို မျက်နှာပြုလျက် ဆုတောင်းလေ၏။ (ဆာလံကျမး် ၃၅း၁၃)
မိမိချစ်ခင်နှစ်သက်ရသောသူဆုံးပါးသဖြင့်လည်း ဥပုသ်တည်ဆောက်ကြသော်လည်း ယင်းကို ယခုအခါတွင် အများအပြားမပြုလုပ်ကြတော့ပေ။ ဥပုသ်တည်ဆောက်ခြင်းသည် ကြုံတောင့်ကြုံ ခဲအခြေအနေတစ်ရပ်တွင် တည်ဆောက်ရန် အခွင့်အရေးရသော်လည်း အများအားဖြင့်မူ ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းသည် အခက်အခဲတစ်ခုအတွင်း ဘုရားရှင်နှင့်နီးစပ်ခြင်းတည်းဟုူသော ခံစားမှုကို ပေးစွမ်းလေသည်။ ၄ထိုစကားကိုကြားလျှင်၊ ငါသည် ထိုင်၍အင်တန်ကာလပတ်လုံး ငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်၊ အစာရှောင်လျက်နေ၍၊ ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင် ဘရားသခင့်ရှေ့တော်၌ ဆုတောင်းသောပဌနာဟူမူကား၊ (နေဟမိမှတ်စာ ၁:၄)
ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်များမှ နောင်တရခြင်းကို ပြသကြသည်။ ဘုရားက ထိုသို့ပြုလုပ် ရန် မပြဠာန်းထားသော်လည်း ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ကျေနပ်နှစ်သက်ကြောင်းကို သိရှိသင့်ပေသည်။ သူတိုသည် မိဇပါမြို့၌စည်းဝေးသဖြင့်၊ ရေကိုခပ်၍ ထာဝဘုရားရှေ‹တော်၌သွန်းလောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်တိုကိုကျင့်လျှက်၊ အကíန်ုပ်တို‹သည် ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားပါပြီဟု ဝန်ခံကြ၏။ ရှမွေလသည် မိဇပါမြို‹၌ ဣသရေလအမျိုးသားတရားမှုတို‹ကို စစ်ကြောစီရင် လေ၏။ ( ၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၇:၆ )ဤသို့သော စွန့်လွှတ်မှုဖြင့် မိမိအပြစ်ကို နောင်တရရခြင်းအား ပြသသဖြင့်လည်း ဘုရားရှင်က မိမိ၏နောင်တရခြင်းကို လက်ခံရာ၏။
ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားရှင်ခံတော်မှ လမ်းညွှန်ခြင်းကို ရရန်အတွက် ဥပုသ်ဆောက်တည် ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အစားအစာအတွက် သုံးစွဲသည့် အရာမှန်သမျှကို ဘုရားအတွက် သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားရှိခိုးခြင်း ၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် နားသောတဆင် ခြင်းတို့တွင် အချိန်ပို၍ပေးနိုင်လေသည်။ ထို့ပြင် ဥပုသ်သည် ၀ိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေတစ်ရပ် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို ဖြစ်စေလေသည်။ ယင်းသည် နှိမ်ချကျိုးနွံခြင်းဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး၏ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒများကို ဖဲခွာပြစ်ကာ ၀ိညာဉ်ရေးရာအလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေကို ပေါက်ပွားစေသည်။ ၁အန္တိအုတ်မြို့တွင်ရှိသော အသင်းတော်၌ ဗာနဗမှစ၍ နိဂါဟုခေါ်ဝေါ်သော ရှုမောင်၊ ကုရေနေပြည် သား လုကိ၊ စော်ဘွားဟေရုဒ်၏ သူငယ်ချင်းအရင်းဖြစ်သော မာနင်နှင့် ရှောလုတည်းဟူသော ပရောဖက်ပြုသူ၊ ဆရာ ပြုသူရှိကြ၏။ ၂ထိုသူတို့သည် သခင်ဘုရားဝတ်ကိုပြု၍ အစာကိုရှောင်ကြစဉ်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က၊ ငါခန့်ထားသောအမှုကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ ဗာနဗနှင့်ရှောလုတို့ကို ရွေးချယ်ခွဲထားကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ သည်အတိုင်း၊ ၃အစာရှောင်၍ ပဌနာပြုလျက်၊ ထိုသူတို့ခေါင်း ပေါ်မှာ လက်ကိုတင်၍ လွှတ်လိုက်ကြ၏။ ( တမန်တော်ဝတ္တု ၁၃:၁-၃)
ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းသည် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၃၇အသက်ကြီးရင့်၍ အနှစ်ရှစ် ဆယ်လေးနှစ်ခန့်မျှ တိုင်တိုင် မုတ်ဆိုးမဖြစ်လျက်၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစာရှောင်ခြင်းအား ဖြင့်နေ့ညဉ့်မပြတ်ဘုရားဝတ်ကိုပြု၍ ဗိမာန်တော်နှင့် မခွါဘဲနေ၏။ ( ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၂:၃၇)
၂၈ထိုအရပ်မှာ မောရှေသည် အစာကိုမစား၊ ရေကိုမသောက်ဘဲ၊ အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး ထာဝရ ဘုရားအထံတော်၌ နေလေ၏။ ကျောက်ပြားပေါ်မှာ ပဋိညာဉ်စကား၊ ပညတ်တော် ဆယ်ပါး ကိုရေးထားတော်မူ၏။ (ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၃၄:၂၈)
၇လူသတ္တဝါ တိရစ္ဆာန် သိုးနွားတို့သည် အလျှင်းမမြည်စေနှင့်။ အစာကို မစား၊ ရေကိုမသောက် စေနှင့်။ (ယောနသတ္ထု ၃:၇)
၁ထိုအမှုရှိသမျှကိုမော်ဒကဲသိသောအခါ မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်၍ ပြားနှင့်လူးလျက်၊ လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်လျက်၊ မြို့အလယ်သို့သွား၍ ကြီးကျယ်သောအသံနှင့် ငိုကြွေးလေ၏၊၊ ၂လျှော်တေအဝတ်ကို ဝတ်လျက် နန်းတော် တံခါးထဲသို့ အဘယ်သူမျှ မဝင်ရသောကြောင့်၊ နန်းတော်တံခါးရှေ့မှာရပ်နေ၏၊၊ ၃ရှင်ဘုရင်အမိန့် တော်စာရောက်လေ သော အပြည်ပြည်တို့၌ ယုဒလူတို့သည် အလွန်ညည်းတွား ခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း၊ ငိုကြွေးမြည် တမ်းခြင်းကိုပြု၍၊ လူများတို့သည် ပြားနှင့်လျှော်တေအဝတ်၌ အိပ်ကြ၏၊၊ ၄မော်ဒကဲအမှုကို ဧသတာ၏ ကျွန်မတို့နှင့် မိန်းမစိုးတို့သည် ကြားပြောသောအခါ မိဖုရားသည် အလွန်ဝမ်းနည်းလျက်၊ မော်ဒကဲဝတ်သော လျှော်တေကိုပယ်၍ အခြားသော အဝတ်ကို ဝတ်စေခြင်းငှါ ပေးလိုက်သောလည်း၊ မော်ဒကဲသည် မခံမယူဘဲနေ၏၊၊ ၅တဖန်ဧသတာသည် ရှင်ဘုရင်အမိန့် တော်နှင့် ခစားသော မိန်းမစိုးဟာတက်ကိုခေါ်၍ အဘယ်အမှုရှိသနည်း၊၊ အဘယ် ကြောင့် ဤသို့ပြုသနည်းဟု မော်ဒကဲကို မေးစေခြင်းငှါ စေလွှတ်သည်အတိုင်း၊ ၆ဟာထက်သည် မော်ဒကဲရှိရာ နန်းတော်တံခါးရှေ့၊ မြို့တော်လမ်း သို့သွား၍ ရမော်ဒကဲသည်မိမိ၌ ရောက်သောအမှုရှိ သမျှကို၄င်း၊ ဟာမန်သည် ယုဒလူတို့ကို ဖျက်ဆီး ခြင်းငှါ ငွေမည်မျှ ကိုဘဏ္ဍာတော်တိုက်ထဲ သို့သွင်း ပါမည်ဟု ဂတိထားကြောင်းကို၄င်း၊ ကြားပြောလျက်၊ ၈ယုဒလူ တို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှါ၊ ရှုရှနန်းတော်၌ ထုတ်သော အမိန့်တော်စာလက်ခံကို ဧသတာအား ပြဘို့ပေး၍ ဧသတာသည် မိမိလူမျိုးအဘို့ တောင်းလျှောက်ခြင်းငှါ၊ ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ ဝင်ရမည်အကြောင်း မှာလိုက်လေ၏၊၊ ၉ဟာတက် သည်လည်းလာ၍ မော်ဒကဲစကားကို ဧသတာအားပြန်ပြော၏၊၊ ၁ဝတဖန်ဧသတာသည် ဟာတက်အား ဖြင့်၊ မော်ဒကဲကိုမှာလိုက်သည်ကား၊ ၁၁ယောကျ်ားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ရှင်ဘုရင် ခေါ်တော်မမူဘဲ အတွင်းတန်တိုင်း၊ ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ ဝင်မိသောသူသည် အသက်ချမ်း သာရမည် အကြောင်း ရွှေရာဇလှံတံကိုကမ်းတော်မမူလျှင်၊ အမှန်သေရမည်အကြောင်း၊ အမိန့်တော်ရှိသည်ကို ရှင်ဘုရင်၏ ကျွန်တော်မျိုးများနှင့် နိုင်ငံတော်ပြည်သူပြည်သားများအပေါင်း တို့သည်သိကြ၏၊၊ အကျွနု်ပ်ကိုကား အရက်သုံးဆယ် ပတ်လုံး၊ ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ ခေါ်တော်မမူဟု၊ ၁၂ဧသတာစကားကို မော်ဒကဲအား ပြန်ပြောသောအခါ၊ မော်ဒကဲက အခြားသောယုဒလူအသက်မလွတ်လျှင်၊ ၁၃နန်းတော်၌ နေသော် လည်း သင့်အသက်လွတ်မည်ဟု မထင်နှင့်၊၊ ၁၄ယခုကာလ သင်သည် တိတ်ဆိတ်စွာ နေလျှင် သင့်နှင့်သင်၏ အဆွေအမျိုးသည် ပျက်စီး၍ ယုဒလူတို့အသက်ရှင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း တစုံတခုပေါ်လိမ့်မည်၊၊ ယခုအမှုကို ဆောင်ဘို့ရာ သင်သည် မိဖုရားအရာကိုရသည်ဟု ထင် စရာရှိ သည်မဟုတ်လောဟု ဧသတာအား ပြန်ပြောစေခြင်းငှါ မှာလိုက်၏၊၊ ၁၅ဧသတာကလည်း ရှုရှန်မြို့၌ရှိ သော ယုဒလူအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေခြင်းငှါသွားပါ၊၊ နေ့ညဉ့်မပြတ်သုံးရက်ပတ်လုံးမစား သောက်ဘဲ နေ၍ အကျွန်ုပ်အဘို့ အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်ကြပါ၊၊ အကျွန်ုပ်သည်လည်း ကျွန်မတို့နှင့် တကွ အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကို ကျင့်ပါမည်။ ထိုနောက် အာဏာတော်ကို ဆန်ရသော်လည်း၊ ရှင်ဘုရင် ထံတော်သို့ ဝင်မည်၊ သေလျှင် အသေခံပါမည်ဟု မော်ဒကဲအား ပြန်ပြောစေခြင်းငှါ မှာလိုက်သမျှအတိုင်း မော်ဒကဲသည် သွား၍ပြုလေ၏၊ (ဧသတာဝတ္တု ၄)
ယေရှုလက်ထက် ဖာရိရှဲများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဥပုသ်ဆောက်တည်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုအား သူ၏သာဝကများ အဘယ်ကြောင့် ဥပုသ်မစောင့်သနည်း ကို မေးမြန်းသည်တွင် ယေရှုက ပုံပြင်တစ် ပုဒ်ဖြင့် ဥပမာပြဖြေဆိုခဲ့သည်။ ယင်းကို ရှင်လုကာခရစ်ဝင် ၅:၃၃ - ၃၉ ၊ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၉:၁၄-၁၅ ၊ ရှင်မာကု ခရစ်ဝင် ၂:၁၈-၂၀ တို့တွင်လေ့လာနိုင်သည်။
၁၆သင်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါ လျှို့ဝှက်သောသူတို့နည်းတူ မျက်နှာညှိုး ခြင်း မရှိကြနှင့်။ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အစာရှောင်သည်ကို လူများတို့ရှေ့မှာထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ မိမိ တို့မျက်နှာကိုဖျက် တတ်ကြ၏။ ၁၇ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အကျိုးကို ခံရကြ၏။ ၁၈သင်သည် အစာရှောင်သောအခါ အစာရှောင်သည်ကိုလူများတို့ရှေ့မှာ မထင်ရှား စေဘဲ၊ မထင်ရှားသော အရပ်၌ရှိတော်မူသော သင်တို့အဘ ရှေ့တော်၌သာ ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ ခေါင်းကိုလိမ်းကျံလော့။ မျက်နှာကိုလည်းသစ်လော့။ မထင်ရှားသောအရာကို မြင်တော်မူသော သင်တို့အဘသည် အကျိုးကို ထင်ရှားစွာ ပေးတော်မူလတံ့။ (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၆:၁၆-၁၈)